Idle umhlanganiso kuma-awards imbongikazi yase Elandskop | News24
Idle umhlanganiso kuma-awards imbongikazi yase Elandskop
Isithombe:SithunyelweImbongikazi uBongeka Mafahleni ohlomule indondo ye-Best Poetry kumcimbi wama Capital Maskandi obungoMgqibelo odlule.
IDLE umhlanganiso kuma KZN Capital Maskandi Awards imbongikazi yase Elandskop igama layo okungu Bongeka Mafahleni (23).
Ama-awards abengoMgqibelo mhlaziyi 30 kuSepthemba ehholo lomphakathi eCaluza kanti uMafahleni uthole indondo emkhakheni we-Best Poetry.
“Sekungokwesibili ngidla umhlanganiso kuwona lama-awards. Ngonyaka odlule ngathatha izindondo ze-Best Poerty Message ne-Reciting, ukuhhaya inkondlo,” kusho uMafahleni.
Uthe ukuqokelwa indondo kulama awards kumuvulele amathuba amaningi.
“Ngakwazi ukuya emazweni angaphandle njengaseSwaziland, ngaphinde ngaya nakwezinye izifundazwe njengaseMpumalanga kanye naseKapa lapho kwakwiyimincintiswano eyahlukahlukene,” kusho yena.
Uqhube wathi ngokuhamba kwesikhathi ugcine eqokwa njengenxusa lenhlangano ebizwa ngokuthi iButho Theater okugcine kumuhambisa ezweni lase Reunion Island.
UMafahleni uthe ukuba yimbongikazi yinto ayiqale ngo-2008 esafunda isikole egqugquzelwa othisha bakhe.
“Kodwa ngangingazi ukuthi engikwenzayo kwakungukuhhaya inkondlo mina ngangithi ngethula inkulumo yami ngezwa ngothisha esengitshela ukuthi yinkondlo,” kusho uMafahleni.
Uthe emva kwalokho ubesengenelela imincintiswano eyahlukahlukene nayo ayedla umhlanganiso kuyona.
“Ngonyaka ka-2012 ngathola ithuba lokuya phesheya kwezilwandle ngenxa kwenkondlo engayiloba mina,” kusho yena.
Ngokusho kwakhe yize eseke wahambela amazwe angaphandle naphesheya kwezilwandle zonke izinkondlo zakhe zibhalwe ngolimi aluncela ebeleni.
Uqhube wathi akagcini ngokuba yimbongikazi kuphela njengoba aphinde abe ngumqeqeshi wohlobo lomdanso obizwa ngokuthi i-Contact Improvisation.
“Lomdanso ngawufundiswa yingcweti yomdanso yaphesheya kwezilwandle ezweni lase-Germany okunguMnu. Bernd Nappe. Kodwa ukuba yimbongikazi yikhona engiziphilisa ngakho kakhulu,” kusho uMafahleni.
Ekhuluma ngokuhlomula kwakhe indondo kowe KZN Capital Maskandi, uMafahleni uthe ujabule kakhulu kanti ubonga bonke abantu abamuvotelile.
“Ngithanda nokubonga amasonto wonke ngokuhlukana kwawo ase Elandskop nezikole ebezenza imicimbi zingivotele kakhulu kanti ngifisa nokubonga nabafundi bala engifunda khona eMsunduzi TVET College,” kusho yena.
Akusiyona indondo yakhe yokuqala ayitholile kulonyaka njengoba kukhona namanye amabili asewazuzile.
“Eyokuqala iButho Theater eyesibili i-SAPD yaseMpumalanga okwakungeyokunguhlonipha njenge Ciko,” kusho uMafahleni.
Uthe zikhona izinkondlo zakhe eziqoshiwe kodwa ngenxa yezimo ahlangabezana nazo zabantu abathi bazomu siza ngokuthi akhiphe icwecwe lakhe kodwa begcine bedlale ngaye useze wadikibala.
“Abanye babeze ngezinhloso zabo ezithize kumina. Kodwa ngiyakholelwa ekutheni uyoqhamuka umuntu oyoba neqiniso angisize ekwenzeni icwecwe lami ngoba baningi abantu abalilangazelelayo,” kusho yena.
Uzichaze njengembongikazi ethinta umhlaba wonkana ngoba ibhala ngezehlo abantu ababhekana nazo.
“Ngiyabhala nangeze politiki ngibuye ngibhale nangokuqondene nathi uqobo. Ezinkozweni nakhona ngike ngihhaye izinkondlo zami ezivame ukukhuluma nabantu abadala njengale eyokuqala engadla ngayo umhlanganiso kuma Capital Maskandi angonyaka odlule isihloko sayo esithi ‘Angizikhethelanga’,” kusho uMafahleni.
Uthe kulonyaka isihloko senkondlo yakhe adle ngayo umhlanganiso sithi ‘Sawbona Sitha Sami,’.
“Kodwa abantu basalangazelele le yangonyaka odlule,” kusho yena.
Uthe uyaqasheka ukuthi ezohhaya izinkondlo zakhe emicimbini enjenge mishado kanye neminye eyahlukahlukene kanti uphinde aqashwe ukuthi aphathe uhlelo kuyo yonke imicimbi.
“Abantu abakwazi ukungisiza kakhulu ukuthi ngiphumelele uDokotela Lee M. beno Dokotela uNgubane kanye nomama u-Connie we ‘Connie’s Kitchen’, noma kunzima kangakanani yibona abantu abasakwazi ukuthi kuvikelwe isithunzi samaciko aseMgungundlovu, siyahlonishwa ngaphandle ngenxa yabo, abantu laba engingafuni ukulahlekelwa yibo ngoba baseluleka besibhekise neqiniso lendlela yokuphila,” ephetha. Lembongikazi inekhasi lika Facebook elibizwa ngokuthi Bongeka Mbongikazi Mafahleni.